एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्षमा विजय मोक्तान निर्वाचित, कस्को मत कति ? - Deshko News Deshko News एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्षमा विजय मोक्तान निर्वाचित, कस्को मत कति ? - Deshko News
एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्षमा विजय मोक्तान निर्वाचित, कस्को मत कति ?
काठमाडौं, भदौ २६
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको छैठौ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा विजय मोक्तान निर्वाचित भएका छन् । आइतबार भएको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकका मोक्तानले ३०९, मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम् प्रतिद्धन्दी नवराज रोस्याराले २९७ मत ल्याए भने अध्यक्षकै प्रतिस्पर्धी यज्ञराज सुवेदीले २२५ मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा हरि न्यौपाने र मिलन राज पन्त निर्वाचित भएका छन् । न्यौपानेले ४०६ र पन्तले ३९१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । उपाध्यक्षका उम्मेदवार खुम्ब रेग्मीले २८४ र प्रेमचन्द्र पोमुले ३७८ मत प्राप्त गरे ।
महिला उपाध्यक्षमा राधा (किरण) सिग्देल निर्वाचित भएकी छिन् । उनले ५४० मत प्राप्त गरिन् भने उनकी निकटतम् प्रतिद्धन्दी शान्ति श्रेष्ठले २६० मत ल्याएकी थिइन ।
महासचिव टंक लम्साल
महासचिवमा टंक लम्साल विजयी भएका छन् । लम्सालले ४०८ मत ल्याउदै विजयी भएका हुन भने उनका प्रतिद्धन्दी कृष्ण देवकोटाले ३८८ मत प्राप्त गरे ।
कोषाध्यक्षमा निनाम्मा राई सर्वाधिक मत ल्याउँदै विजयी भएकी छिन् । राईले ४३४ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् भने उनका प्रतिद्धन्दी पवित्रा पौडेलले १८७, चिरण श्रेष्ठ १५७ र चैत्य रत्न कंसाकारले ५३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
आइसीसी सदस्यमा नारायण अधिकारी निर्वाचित भएका छन् उनले ४०२ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी प्रेम सिंह गुरुङले ३९६ मत ल्याएका थिए ।
एनआरएनए जर्मनीको इतिहासमा यो पहिलो पटक निर्वाचन भएको हो । यसअघिका पाँचवटा अधिवेशन सहमतिबाटै भएका थिए ।जर्मनीका छ वटा सहरमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गरेका थिए ।
एनआरएनए जर्मनी अध्यक्ष उम्मेदवार निनाम्माको अपील- ‘हातेमालो गरेर सँगसंगै अगाडि बढौ’
काठमाडौं, साउन १५ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको अध्यक्ष पदका लागि साउन १५ अर्थात
यस्ता छन् एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्ष उम्मेद्वार निनाम्मा राईका भावी योजना तथा कार्यक्रमहरु
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको अध्यक्ष पदका लागि निनाम्मा राईले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु भएको
जुम्ल्याहा बच्चासहित अलपत्र परेकी आमाको यूएईबाट उद्दार
काठमाडौँ, असार १६ झण्डै आठ महिना भन्दा बढी सेल्टरमा रहँदा डोल्मा लामाले (नाम परिवर्तन) सोचेकी